Poolisiin Keeniyaa kabaja ayyaana waggaa haaraan wal qabatee rakkoon nageenyaa akka hin mudanneef humna naga kabachiiftota ramadaamanii akka dabalu ifoomse.
Boruu ayyaana Qillee kaasee waqtii kabaja ayyaaana waggaa haaraa rakkoon nageenyaa akka hin mudanneef eegdotni manneetii sirreessaa keeniyaa fi warra daandiirratti seera tiraafikii kabachiisu poolisoota nageenya eegan waliin ramaduu poolisiin Keeniyaa beeksiseera.
Ajajaan Poolisii Keeniyaa Hilaarii Mutiyaambaay humna poolisii biyyattiin qabdutti, eegdonni manneetii amala sirreessaa kuma shan oli ramdamanii nagaa biyyaa eegaa jiruu jedhan yoo dubbatan.
“Lammileen biyyattii sodaa nageenyaa male ayyaana kana akka kabajaniif guutummaa biyyattiitti humni nagaa kabachiisu bobba’ee jira. Akka tasaa yoo rakkoon nageenyaa naannoo keessanitti mudate, lakkoofsa bilbilaa jiruu fi qaamaanis waajjira poolisiitti yoo beeksistan qaamni nagaa eegu tarakaanfii malu fudhachuuf qophaayee jira.” Inspekter Jeneraal Hiilarii Mutiyaambaay
Ajajaan Poolisii Keeniyaa ammas dabalataan balaa tiraafikaa yeroo ayyaanaa kana mudachuu male ilaalchisuun akeekkachiisa kennaniiru. Inspekter Jeneraal Hiilariin akka jedhanitti, waggaa dhumarra jiru kana qofaa keessatti namootni kuma sadii fi dhibba sadii ol Keeniyaa keessatti balaa tiraafikaa Kanaan lubbuu dhabaniiru jedhan. Ka waggaa darbee waliin wal bira qabanii yoo himan du’aatiin namaa inni baranaa dhibbeentaa9 olii ol dabaluu eeranii konkolaachiftootaaf of eeggannoo himaniiru.
Humnootni nageenyaa amma guutuu biyyaatti ramadaman shofeerota seera tiraafikaa cabsanii fi warra yakka hojjechuufsocho’u mararratti tarkaanfii malu ni fudhatu jedhan.
Dhumarrattis labsiin dhibeee kooronaan wal qabatee labsame hojiirra akka jiru lammileen keeniyaa akka quba qabaatan, yoo ayyaana kana kabajanis of eeggannoo malu akka taasisan gaafatanii jiru.
Prezidaant Traamp Maallaqa Ministrii Ittisaaf Kongresiin Ramade Ugguran